Abaningi manje hybrids kanye nezinhlobonhlobo sweet pepper zihlukile isikhathi yokuvuthwa, okuyinto kubhekwa kusukela ukuhluma ukuze ripeness lobuchwepheshe.
Zakuqala-ukukhula pepper abavuthiwe ezinsukwini 90-110, ngoba nokuvuthwa Ephakathi eside ichazwa izinsuku 130, phakathi-yokuvuthwa emva kwezinsuku 130. On Growth Development pepper sifanamsindvo kukhona determinant (ukukhula kungagcini yabo) - lezi ongaphakeme-ebangeni nokukhula ophansi. Ziyakwazi efanelekayo okhulayo izimo endle futhi zokugcina unheated. High eyingqabavu futhi ezinkulu-fruited pepper indenterminatnye - ekhula njalo, nokukhula yabo akugcini. Lezi izinhlobo engcono kwanda zokugcina ukufuthelana, kodwa zakuqala-ukukhula indeterminate ukunikeza ezithela kakhulu futhi zokugcina unheated.
afune izinto ngenkani kwabanye kakhulu ukukhanya nokushisa pepper. Imbewu ukuthi labengekho abandayo, abakwazi ukunikeza izithombo, lubheke USB. Ungagcini isikhathi eside - ukuhluma izinga kuyehla kube 30% emva kweminyaka 2-3 isitoreji. Ezinye izinhlobo efana ukuhluma lokushisa ingaphezu degrees 30. Ukuhlwanyela imbewu kufanele igcinwe efudumele, noma kuyokwenza iqhwa okwesikhathi eside. Mhlawumbe kuphela okushisa ebusuku udedele degrees 25.
Imbewu engcono zigcwele olusebenza - uyonikwa amahlumela ezinobungane. Lokhu pepper kabani imbewu ziyohlala phansi indebe, uma sigcwale amanzi. Nevskhozhie iflothi ezingenalutho phezu kwamanzi. Isici ezithakazelisayo zalesi yemifino anazo. Peppers kabani imbewu zigcinwe isikhathi eside, ulahlekelwa ukuhluma nokukhula ngamandla abo - amahlumela ababuthakathaka dweba. Kodwa amahlumela ngokushesha uthole ngaphansi ndlela, kanye nenzalo amakhophi anjalo muhle kakhulu. Thenga imbewu izinkampani efakazelwe.
Imbewu Dutch pha akusho ukuhlukanisa kusukela abavamile. Imbewu nzalo Dutch ibiza kodwa zako zinkulu. Ukuze zokugcina, zingabantu esihle: esiwusizo kakhulu - F1 Orange Wonder - isivuno 10 kg 1 sq. m, izithelo cuboidal nge ukushuba udonga 1 cm, emikhulu yayo - F1 indane. bakhiphe elezinga eliphansi kancane ngokubukeka, kodwa futhi sikulungele ukuhoxa, ekuseni yokuvuthwa F1 esihlwabusayo F1 Montero Pantin. Ngaphezu kwalokho, F1 Montero amelana ugwayi KaMose pepper.
Ukuze orientation emhlabeni pepper amnandi ngesisekelo isipiliyoni abatshali ngezansi isihloko kanye nencazelo emfushane kwezinye izinhlobo. Top imbewu pepper zakuqala-ukukhula: Belozorka (izithelo Isigaxa emise bushelelezi zinhle okokuqandisa), iSpanishi amnandi (amnandi ngempela nokulandela isiqondiso), Bogdan (sweet kakhulu futhi obukhulu-ngodonga). Ukuze nemibandela laseSiberia ehlobo Snowball ezinhle, Snegirek Hlobo, freckles. Lezi izinhlobo abatshalwé izithombo eneminyaka engu kwezinsuku 65, kuyinto efiselekayo ukuthi ngesikhathi befika esigabeni Olufufusayo. Khona-ke pepper ukunambitheka omuhle sokujabulisa friendly sokuvuna umthelela.
The best Ephakathi-kungase kutholakale izinhlobo ezilandelayo: Red Giant, uClaudio, Hercules, Red Giant. pepper izithelo zonke lezi izinhlobo eliphezulu ukuhoxa sweet, namanzi, ezinkulu. Ukuze izinhlobo zokugcina unheated esungulwe Agapovsky, Ubuqotho Dobrynya, imvula Golden, ezempilo, kanye nzalo yasekhaya - isimangaliso Orange we F1, le F1 Rhapsody, iJubili Semko le F1, Atlas F1. Mid-grade linesizotha Korenovskiy e izimo ezikahle bathele esihle okumnandi futhi izithelo ezinkulu.
pepper abaningi abadumile California isimangaliso (kukhona obomvu, ophuzi kanye khona). Izithelo lokhu ezihlukahlukene zinkulu, obukhulu, namanzi futhi ezihlwabusayo kakhulu. Ukuqina, enesisindo 350 g, sikhule Ilia Muromtsa Bheka, Titan Tolstoho okuyinhloko. Viking Okude (red yellow) ngesandla esivulekile ethulwa abakhathalelayo umnikazi side izithelo nge ukunambitheka omuhle. Uma ufuna ehlukahlukene ingase ibe nombala obomvu-orange-ophuzi pepper nsomi ngokubomvu ushokoledi imibala, udinga ukutshala ezihlukahlukene Eastern Star futhi ikhule izithelo ukuze ripeness begazi.
Zitshalwa isiqinti pepper, imbewu kusukela emabangeni engcono ongazilungiselela, kodwa siqale sifunde indlela yokukwenza kwesokudla. Ungalugcini imbewu nzalo - luyize. Ngeke unike isivuno. Futhi-ke, i-isivuno engcono udinga ukunikeza le yemifino iyindawo sunniest kusayithi ukuhlinzeka ngesikhathi esifanele enama - hoeing futhi Ukuhlakula ukhula, okwenza umquba kudingekile, isilawuli inkathazo nezifo.
Noma ngabe okudingeka ngezikhathi zasebusika cut rose - izeluleko kongoti
"Izikhungo ivaliwe" Ubuthi 4: ukudlula imfuno
"Stalker okunye.": Indzima ezempi. Ukudlula "Stalker. Alternative" 1.2
Ilayisensi ye-izikhali ezibangela ukucindezeleka. Imibhalo ukuthola ilayisensi